Ọdịdị nke Pheasant | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọdịdị nke Pheasant
7 kachasị mma nke pheasants
Ọtụtụ afọ gara aga, ndị bi n'obodo nta ndị dị nso na Phasis River nke dị na Gris oge ochie malitere ịzụ ụmụ nnụnụ mara nnọọ mma, ndị anụ ha nwere ezigbo uto. A kwenyere na ndị pheasants nwetara aha ha n'aha Fasis, nke dị nso na ha na-eri mbụ n'ụlọ ha. Pheasants bụ ndị nnọchianya kachasị elu nke nchịkọta nke Chicken.
Ezigbo odo odo na ulo: otu esi amuta na otu esi esi na-eri nri
Maka ịmalite, ịzụlite ndị na-agwọ ọrịa n'ụlọ dị ka ihe siri ike ma ọ bụghị mgbe niile na-aga nke ọma. Ma, n'eziokwu, nnụnụ a a na-ahụ anya adịghị dị iche na ọkụkọ nkịtị ma ọ na-eche na ọ dị mma n'afọ niile n'èzí oghere. Kedu ka esi edozi pheasants oyi dị jụụ na ọnọdụ ihu igwe siri ike, ihe ị ga-eri nri, otu esi zere ọnwụ na ịzụ ụmụ - anyị ga-akọ banyere ihe a niile na nke a.
Ọdịdị Ngwá Agha
White pheasants: ihe dị ha mma, ebe ha bi, ihe ha na-eri
Maka ezi ndị nnụnụ na-apụ apụ, onye na-acha ọcha na-acha ọcha nwere ike ịghọ ezigbo mma nke yad, n'ihi na, ma e wezụga ọdịdị mara mma, a na-ahụ ya site n'amara ya na ihe dị mfe na nlekọta ya. Kedu ụdị ndị na-acha anụ ọkụkọ na-ahọrọ ụdị dịgasị iche iche n'ihi agbacha mara mma, na n'ọnọdụ dị mma nke ịchebe osisi ahụ ga-anọgide na-acha ọcha.
Eared pheasants: nkọwa, foto
A na-ewere ndị na-ahụ anya dị ka ndị kachasị nnochite anya nke ụdị ha, na n'etiti ndị ọzọ na-apụta maka ọdịdị na-egbuke egbuke ha na-egbuke egbuke. Ọmarịcha ha na-adọrọ adọrọ, ọ bụghị naanị n'ime ihe ndị ahụ dị mma, kamakwa n'ime ọdịdị ahụ. Kedu ihe njirimara nke nnụnụ a, ihe ọ na-anọchite anya nlekọta na nkwado - mụta ihe site na isiokwu ahụ.
Onye na-agba ọsọ nkịtị: ihe ọ dị, ebe ọ dị ndụ, ihe ọ na-eri
Taa, anyị ga-ekwurita banyere onye na - agụ anụ - nnụnụ, nke bụ ihe a na - achọ ịchụ nta, yana akara nke South Dakota na United States. Nnukwu nnụnụ mara mma a bụ onye ikwu anụ ọkụkọ na-echekwa nke ọma na ubi onye ọrụ ugbo. Na mpaghara anyị, ma anụ ọhịa na domesticated pheasants dị mma, ma ọ ga-ekwe omume ịzụlite ha ebe a.